Kuyaqala Ukuhlolwa Ngokwezempilo Komphakathi | Ndwedwe Local Municipality
Adjustment Budget 2018/19
Original Adjustment 2018/19
Second Adjustment 2018/19
Adjustment Budget 2019/20
Adjustment Budget 2020/21
Special Adjustment Budget 2019/20
Special Adjustment Budget 2020/21
Approved 2019/20 Annual Budget
Approved 2020/21 Annual Budget
Approved 2021/2022 Budget
Section 72 – 2018/19
Section 72 – 2020/21
Performance Agreements – 2021-22
PMS Agreements – 2020/2021
Order Reports 2017
2nd Adjustment SDBIP
Young Maidens’ Programme
Tender Archives – 2017/18
Tender Archives – 2018/19
Kuyaqala Ukuhlolwa Ngokwezempilo Komphakathi
Posted on April 8, 2020 by press
Ezinsukwini nasemavikini azayo, onompilo abangu-10 000 bazobekwa kulo lonke izwe ukuhlola umuzi nomuzi emiphakathini yakithi esengcupheni enkulu. Onompilo bazohlinzekwa ngemifaniswano nezigqebhezana ezizotshengisa ukuthi bangobani okuzokwenza kube lula ukuthi umphakathi ubabone futhi ubavulele.
Lo msebenzi uzokwenzeka ngokulandela indlela ehlosiwe ngokwezigaba kanti izindawo eziminyene kakhulu zizovakashelwa ngehlandla lokuqala.
UKUHLOLWA KUSEMQOKA KULEMPI ESIBHEKENE NAYO
Ukuhlolwa kuyindlela yabezempilo yokuthola ukuthi ngabe unayo noma cha i-COVID-19. Unompilo uzokubuza imibuzo bese ehlola izinga lokushisa kwakho ngokuhambisa umshini esiphongweni sakho.
Unompilo uzokubuza ukuthi:
Uke wavakashela na ezweni esilithatha njengeliyingozi ezinsukwini eziyi-14 ezedlule,
Uke wathintana na nanoma wubani okuqinisekiswe ukuthi une-COVID-19 ezinsukwini eziyi-14 ezedlule,
Unazo na izimpawu ezifana nemfiva, ukukhwehlela kanye nokuphefumula kanzima.
Uma uke wavakashela izwe esilithatha njengeliyingozi noma uke wathintana nomuntu one-COVID-19, kuzomele uzivalele wedwana, uqhele kwabanye ukuze bangatheleleki.
Lokhu kusho ukuthi kumele uhlale ekhaya izinsuku ezingu-14 uzigade ngokubhekisisa izimpawu ezifana nokukhwehlela okomile, imfiva nokuphefumula kanzima ukuthi ziyaqhubeka na. Ziqhelelanise nabantu abadala kanye nabantu ababuthaka empilweni noma abanokugula okufana nomfutho wegazi ophakeme noma abanesifo sikashukela.
Onompilo bazodlulisela abantu abasolakala ngokuba negciwane le-corona (COVID-19) esikhungweni somphakathi sezempilo, emtholampilo noma esibhedlela esiseduze. Nasezikhungweni zokunakekela kwempilo nakomahambanendlwana kuzokwenziwa ukuhlola.
Akuwona wonke umuntu ozohlolwa kepha, onompilo bazosebenzisa indlela yokubala ngokubuka ukuthi ngabe izimpawu onazo zibucayi kangakanani nokuthi bungakanani ubungozi okubo.
Ukuhlolwa kwenziwa ngokuthatha isampula emzimbeni wesiguli okufana nokudonsa uketshezi emakhaleni noma ukudonsa igazi, okuzobe sekuyohlolwa elebhu (lab) igciwane le-corona noma okunye okungadingeki emzimbeni.
UKUPHEPHA KWABASEBENZI BEZEMPILO KUSEMQOKA
Sifisa ukuqinisekisa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi abasebenzi abazobe besebenza ngaphandle kanye nalabo abasebenza phambili kwezempilo bazohlinzekwa ngokokuzivikela okwanele.
Sikuzwile ukukhathazeka kwabasebenzi bethu bezempilo futhi sifisa ukubaqinisekisa ukuthi ukuphepha kwabo kubaluleke kakhulu. Sizokwenza konke okusemandleni ukugcina abasebenzi bethu bezempilo bephephile.
NGOKUBAMBISANA SINGAKUQEDA UKUTHELELEKA
Abantu baseNingizimu Afrika mabalisabele ngobuningi ikhwelo likahulumeni. Iningi lilokhu liyidlala indima yalo ukuqeda ukubhebhetheka kwegciwane le-corona. Noma kunjalo, kumele sihlale siqaphele futhi ngeke sikwazi ukuyekelela nje.
Ubusika buyeza futhi lokhu kungashintsha ubume besimo esikuso njengamanje sibe bucayi kakhudlwana. Siyazi ukuthi ukuvalwa kwezwe kuyasebenza ngokubona ukwenza kahle kwamanye amazwe athathe isinqumo sokubeka imikhawulo efanayo.
Ngokulandela iminqubo-migomo, ukuhlala ekhaya, ukulandela izindlela zenhlanzeko nokusebenza ngokubambisana sinethuba elihle kakhulu lokunqanda ukubhebhetheka.
Noma kunjalo, sikhathazekile ngalabo bantu abangakabuboni ubucayi balesi sifo. Lesi sifo sikhona ngempela futhi sinobungozi obukhulu kithina sonke kanye nomphakathi wakithi. Sihlasela ocebile nohlwempu, omncane nomdala, onsundu nomhlophe, labo abahlala emadolobheni nalabo abahlala ezindaweni zasemakhaya.
Ngaso sonke isikhathi uma uphula iminqubo-mgomo, uzibeka wena nabanye engcupheni, futhi usiza ukubhebhethekisa igciwane.
This entry was posted in Access to info, COVID by press. Bookmark the permalink.